RealMadrid Oo bedelka Di Maria u aragta Sterling
HomeWararka MaantaRealMadrid Oo bedelka Di Maria u aragta Sterling
Macalinka kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa waxaa uu xiisanayaa in uu la soo wareego xiddiga garabka weerarka ugu ciyaara xulka England iyo kooxda Liverpool kaasi ay macquul tahay in uu xagaaga dambe u soo dhaqaaqo gegada Bernabeu ee dalkaasi Spain.
Jariidada AS ayaa qortay in Carlo Ancelotti uu taageero wayn u yahay 19-jirkan uuna ka helay qaab ciyaareedkiisa waxaana xiddigan uu ka mid ahaa xidiga xulka sadexda libaax u matalayay koobka aduunka inkasta ay si fudud kaga soo bexeen waxaana uu daawanayay macalinka reer talyaani kulankii ay Italy kula ciyaareen magaalada Manaus.
Si kastaba macalinkii hore ee kooxaha Chelsea iyo AC Milan ayaa waxaana uu rabaa in uu codsi rasmi ah u gudbiyo kooxda Liverpool si ay u soo qaataan wiilkan da,da yar waxaana Sterling uu laftigiisu jecelyahay kooxda ku guuleesatay Champions League ee Real Madrid.
Fikrada ah in kooxda Real la keeno da,yarkan reer England ayaa ka dambaysa kadib markii la sheegay in kooxda uu ka tagi doono xiddiga qaranka Arjentine Angel Di Maria waxaana Sterling u arkaan badalka ugu haboon xiddigan .
Sterling ayaa wali wada hadalo heshiis cusboonaysiin kula jira kooxdiisa Liverpool isaga oo dalbaday mushahar gaadhaya £100,000-Toddobaadkii uu ka qaadanayo Anfield.